Dadka aan la tallaalin ayaa laga mamnuucay badi goobaha caamka ah ee Austria
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Dalka Austria » Dadka aan la tallaalin ayaa laga mamnuucay badi goobaha caamka ah ee Austria
Wararka Dalka Austria • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Hogaamiyaha Austria Alexander Schalenberg
Mamnuucida galitaanka waxa ay dhaqan gali doontaa usbuuca soo socda waxa ayna khusaysaa kafateeriyada, baararka, makhaayadaha, tiyaatarada, meelaha barafka lagu ciyaaro, hudheelada, timo jarayaasha iyo dhacdo kasta oo ay ku lug leeyihiin in ka badan 25 qof.
Dowladda Austria ayaa sheegtay inay rajaynayso in tirooyinka cusub ee COVID-19 ay gaaraan heerar cusub toddobaadyada soo socda.
Dhammaan dadka aan la tallaalin waxaa laga mamnuuci doonaa inay galaan liis dheer oo ah meelaha dadweynaha, oo ay ku jiraan baararka, kafateeriyada iyo hoteellada.
Waxaa jiri doona afar toddobaad oo xilli kala-guur ah, inta lagu guda jiro kuwa helay qaddarkoodii ugu horreeyay ee tallaalka oo bixin kara baaritaanka PCR-ga xun laga dhaafi doono sharciyada.
Isaga oo tixraacaya koror degdeg ah oo lama filaan ah oo ku saabsan kiisaska cusub ee COVID-19, Chancellor-ka Australiya Alexander Schallenberg wuxuu ku dhawaaqay in dhammaan dadka aan la tallaalin dhowaan laga mamnuuci doono inay galaan liis dheer oo ah meelaha dadweynaha, oo ay ku jiraan baararka, maqaayadaha, tiyaatarada iyo hoteellada.
"Horumarku waa mid aan caadi ahayn oo deggenaanshaha sariiraha daryeelka degdegga ah ayaa si aad ah u kordhaya si ka dhakhso badan sidii aan filaynay," Schallenberg ayaa sidaas yidhi isaga oo ku dhawaaqaya xannibaadaha cusub.
Sida laga soo xigtay Schallenberg, mamnuucida gelitaanka waxay dhaqan geli doontaa usbuuca soo socda waxayna khusaysaa kafateeriyada, baararka, makhaayadaha, tiyaatarada, meelaha barafka lagu ciyaaro, hoteelada, timo jarayaasha iyo dhacdo kasta oo ay ku lug leeyihiin in ka badan 25 qof.
Xayiraadaha cusub waxay saameyn karaan qayb weyn oo ka mid ah AustriaDadka, oo 36% ka mid ah dadka deggan aan weli si buuxda looga tallaalin fayraska COVID-19.
Kiisaska cusub ee COVID-19 ee maalinlaha ah ayaa ku dhacay 9,388 shalay, taas oo kor u kacday AustriaRikoorka rikoorka ah ee 9,586 ayaa la diiwaan geliyay sanadkii hore, waxayna dowladdu sheegtay inay rajaynayso in tirooyinka ay gaaraan heerar cusub toddobaadyada soo socda.
In kasta oo tillaabooyinka ay dhaqan geli doonaan Isniinta, Schallenberg wuxuu sheegay in ay jiri doonto muddo afar toddobaad ah oo kala-guur ah, inta lagu gudajiro kuwa qaatay qiyaastoodii ugu horreysay ee tallaalka oo bixin kara baaritaanka PCR-ga xun laga dhaafi doono shuruucda. Afartaas toddobaad ka dib, si kastaba ha ahaatee, inta badan goobaha caamka ah ayaa albaabadooda u furi doona kaliya kuwa si buuxda u talaalan ama kuwa dhawaan ka soo kabsaday caabuqa COVID-19.
Xayiraadaha cusub, oo muraayadaha lagu soo rogay magaalada caasimadda ah ee Vienna horraantii toddobaadkan, ma khuseeyaan shaqaalaha xarumaha, kaliya macaamiishooda, sida uu ku dooday ra'iisul wasaaraha "Mid ka mid ah waa hawlo firaaqo ah oo si ikhtiyaari ah loo sameeyo - qofna iguma qasbi karo inaan aado. shaleemada ama makhaayadda - midda kale waa goobta shaqadayda."
Dowladda uu hogaamiyo muxaafidku waxay qeexday xitaa xayiraado adag oo saaran kuwa aan la tallaalin haddii 600 ama in ka badan oo sariiraha daryeelka degdega ah ee Australiya ay ka buuxaan bukaannada COVID-19, si wax ku ool ah u gelinaya xannibaadda. Laga soo bilaabo Khamiista, tiradaasi waxay istaagtay 352, laakiin waxay ku sii kordhaysay wax ka badan 10 maalintii.
Austria Waxay aad uga fog tahay waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee hirgeliya mamnuucid soo galitaanka la mid ah, iyadoo Faransiiska iyo Talyaanigu ay abuureen nidaamyo gudbinta tallaalka dhijitaalka ah oo iyaga u gaar ah si loo dhaqan geliyo tallaabooyinka.
Germany, sidoo kale, hadda waxay soo jeedinaysaa fikrad isku mid ah. Maaddaama dawladaha Jarmalku ay hirgeliyaan xiritaanno dheeri ah iyo shuruudaha tallaalka, Chancellor-ka xilka kasii degaya Angela Merkel waxay ku cadaadisay "xakameyn ba'an" kuwa aan laga tallaalin guud ahaan Jarmalka horaantii toddobaadkan.